Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment तनावको बेला पटक-पटक अनुहारमा हात किन पुग्छ ? - Pnpkhabar.com
तनावको बेला पटक-पटक अनुहारमा हात किन पुग्छ ?
अक्सर हाम्रो हात कस्तो अवस्थामा अनुहारमा पुग्छ ? ख्याल गर्ने हो भने सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ । हामीहरू प्राय चिन्तित वा निरास भएको बेला अनुहारमा हात राखेर झोक्राइरहेका हुन्छौँ । डराएका बेला हत्तनपत्त हातले अनुहार छोप्छौँ । रोएका बेला हात अनुहारमा नै पुगेको हुन्छ । रुँदा कि त अनुहार छोपिरहेका हुन्छौँ कि आँखा मिचिरहेका हुन्छौँ ।
लजाएको समयमा पनि अनायासै हाम्रो हात अनुहारमा पुगिसकेको हुन्छ। खुसी भएको बेला वा दुखद् समाचार सुन्दा हाम्रो हात मुख छोप्न पुगिसकेको हुन्छ । समस्याको समधान नभेटेर सोचिरहेको बेला हामी या त नाक कोट्याइरहेका हुन्छौँ। या त कान वा कपाल तानिरहेका हुन्छौँ वा हाम्रो हातका औँलाहरू ओठमा पुगिसकेका हुन्छन् ।
कसैको पीडामा सहानुभूति देखाउँदा वा अरुको खुसीमा सामेल हुँदा पनि हाम्रो हात उसको गाला वा अनुहारमै पुग्ने गर्छ । अनुहार मनको ऐना हो । मनका भावहरू जस्तो पिर, व्यथा, वेदना, खुसी, उमंग अर्थात् संवेगको अभिव्यक्ति हाम्रो अनुहारबाट नै भइरहेको हुन्छ ।
खुसी वा दु:खी हुँदा दुवै अवस्थामा तनाव बढ्छ । हात नचलाई हामी बस्नै सक्दैनौँ । सामान्यतया कम्तीमा पनि एक घण्टामा २/४ पटक अनुहारमा हात पुग्नुलाई आधारभूत मानवीय स्वभाव नै मानिन्छ । तर, तनावमा भएको बेला भने अरु सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै पटक हाम्रो हात अनुहारमा पुग्ने गर्छ।
विश्वभरि नै अहिले कोरोनाको संकट छ । यो अवस्थामा हामी सबैमा अलिअलि भए पनि डर चिन्ता र तनाव पक्कै बढेको हुनुपर्छ। यसलाई सामान्य र स्वभाविक नै मानिन्छ । कतिपयमा भने यो समस्या अलिक बढी नै पनि हुन सक्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा डर, चिन्ता र तनावको कारण शरीर र मन दुवै अशान्त हुने, छट्पटी बढ्ने, अस्थिर हुने, उकुसमुकुस हुने हुन्छ ।
कोरोनाको प्रकोप बढेसँगै मनोसामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि बढेर गएका छन् । चिन्ता तथा चिन्ताजन्य मानसिक समस्या जस्तो अव्सेन्सिभ कम्पल्सिभ डिसअडर्स, प्यानिक अट्याक, मानसिक आघात, डिप्रेसन, एक्युटस्टेस डिसअडर्स, तनाव तथा तनावजन्य मनोवैज्ञानिक समस्याहरू यस्तो अवस्थामा अरु बेलाभन्दा धेरै बढने गर्छन् ।
यस्ता लक्षणहरूले गर्दा पनि हामीलाई असहज भइ हाम्रो हात नाक, मुख, आँखामा पुग्छ । हामी अनायसै अनुहार र शरीर सुम्सुम्याउन पुग्छौँ। अझ कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदा देखिने मुख्य लक्षण ज्वरो आउने हुँदा यसको डरले धेरै सताएमा पटकपटक अनायासै वा जानीजानी पनि निधार छाम्न पुगिन्छ ।
आफ्नो अनुहार आफैँले सुम्सुम्याउने, नाक कोट्याउने, कान कोट्याउने, आँखा मिच्ने, औँलाले ओठ चलाउने नङ टोक्ने लगायतका कार्यहरू नजानिदो पाराले हामी गरिरहेका हुन्छौँ ।
यसो गर्दा हामीलाई आनन्द महसुस हुने, सन्तुष्टि मिल्ने एवं तनाव कम भएको महसुस हुनेगर्छ । हामीले आफैँलाई छोएर शरीर, अनुहार सुम्सुम्याएर आफ्नो संवेग र ध्यानलाई नियन्त्रण गर्न खोजीरहेका हुन्छौँ। यसले संवेगात्मक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।
तनाव कम गर्न वा तनाव मानवीय स्वभावबारे अनुसन्धान गरेका वैज्ञानिक माइकल हल्स्वर्थले यस तथ्यलाई स्वीकार गर्दै मानिसहरूको यो व्यवहारलाई बदल्न निकै गाह्रो रहेको बताएका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा मानिसलाई अनुहार नछुन आग्रह गर्नुभन्दा पनि हात धोइराख्न आग्रह गर्न सजिलो हुने उनको राय छ ।
– तनावको बेला हामीमा अस्थिरता बढ्ने तथा हातहरू पनि अनुहारतिर धेरै जाने हुनाले तनाव व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । तनाव व्यवस्थापनका विभिन्न तरिका र विधिहरु छन् ।
– आवश्यक परेको खण्डमा साइकोथेरापी वा मनोपरामर्श सेवा पनि लिन सकिन्छ।